Thola umzila wezinqaba zaseLoire eFrance | Bezzia
Umzila wezinqaba zaseLoire eFrance
USusana Garcia | 28/04/2021 10:00 | Indlela yokuphila, travel
Uma usuvele ucabanga ngohambo lwakho olulandelayo, awukwazi ukuphuthelwa ezinye zeziphakamiso zethu. Kunezindawo ezizohlala zisishiya simangele, ngoba zibukeka zithathwe endabeni. Umzila wezinqaba zeLoire Valley eFrance Ingenye yalawo masayithi engashiyi muntu engenandaba. Ingenye yemizila yothando futhi emangalisayo engenziwa eFrance yazi indawo egcwele izinqaba zobuhle obumangalisayo.
Nini sikhuluma ngezinqaba zaseLoire Sikhuluma ngalezi zakhiwo ezitholakala engxenyeni engezansi esezingeni lomfula iLoire maphakathi neFrance. Eziningi zalezi zinqaba zivela eNkathini Ephakathi, ezakhiwe njengezinqaba eziyiqiniso, yize kwakhiwa neziteshi zakamuva kamuva, ezihloselwe njengezindawo zokuhlala izicukuthwane. Namuhla lezi zinqaba ziyingxenye yeWorld Heritage Site.
1 Lungiselela ukuvakasha kwakho
2 Inqaba yaseSully-sur-Loire
3 Chenonceau Inqaba
4 Inqaba yeChambord
5 IVillandry Castle
6 IChaumont Castle
Lungiselela ukuvakasha kwakho
Endaweni yaseLoire Valley singathola izinqaba ezingaphezu kwamashumi amahlanu, okwenza kube nzima ukuzibona zonke. Yingakho okuvame ukwenziwa uhlu olunezigodlo ezithakazelisa kakhulu, okwenza umzila wokumboza. Iningi lakhona liphakathi kwamadolobha ase-Angers nase-Orleans, ngakho-ke umzila uvame ukwenziwa kusuka komunye uye komunye. I- izikhathi ezihamba phambili zisesikhathini sentwasahlobo nasekwindla, lapho isimo sezulu sihle, ngoba awukwazi ukuvakashela izinqaba kuphela, kepha nezindawo ezizungezile ezinamahlathi, izingadi noma izivini.
Le nqaba yekhulu le-XNUMX ingenye yezindawo ezisetshenziswa kahle kakhulu njengenqaba evikela izimpi. Izungezwe umsele futhi ungahamba ngendlela yawo yokuhamba noma ungene ngaphakathi ukuze ubone ithuna le-Earl kaSully noma ifreyimu endala yenganono yekhulu le-XNUMX.
Lesi ngesinye sezigodlo ezinhle kakhulu eLoire futhi futhi ngesinye sezidume kakhulu. Kuyinto Isigodlo sekhulu le-XNUMX esaziwa ngokuthi 'isigodlo samantombazane' ngenxa yezinguquko ezenziwa ngabesifazane abehlukene ngokuhamba kwesikhathi. Inesinye sezindawo zangaphakathi ezihlaba umxhwele futhi esinobuhle obukhulu ngaphandle ngethoni yaso emhlophe, imibhoshongo yangemuva nezingadi. Ngaphezu kwalokho, iqoqo elibalulekile lemidwebo yabadwebi abanjengoRubens noma uMurillo lisilindele ngaphakathi.
Lesi esinye isigodlo esidume ngempela lapho kufanele uthole khona umnyango kusengaphambili ukuze ungashiywa ngaphandle kwawo. INkosi uFrancis I isebenzise i- amahlathi amahle azungezile ukuzingela futhi ingenye yamakhulu amakhulu eMfuleni iLoire enamagumbi angaphezu kwamakhulu amane. Isinikeza isibonelo esihle se-French Renaissance futhi inezitebhisi ezinkulu ngaphakathi abathi zakhiwe nguLeonardo da Vinci.
Izingadi ezinhle kakhulu ezinqabeni ze- ULoire ubonakala etholakala eCastle of Villandry. Le nqaba yakhiwa ngesikhathi se-Renaissance futhi inezingadi ezinkulu kakhulu futhi ezimangalisa ngempela ezingezinye ezinhle kakhulu eFrance. Banemiklamo ehlukene nezindikimba emazingeni amathathu amathala.
Lokhu kutholakala kokunye okubaluleke kakhulu okungafanele neze seqe. Le nqaba kwakungekaCatherine de Medici futhi kwaba eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX nele-XNUMX. Kuyisigodlo esikhulu esinezingadi zezitayela zesiNgisi nemisebenzi yobuciko. Kuyisigodlo esibuyiselwe kahle esinemibhoshongo emakiwe esikhumbuza lezo zinqaba ezijwayelekile zezinganekwane. Ngaphezu kwalokho, ithala layo ungabona umbono omuhle we-panoramic we-Loire Valley.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Umzila wezinqaba zaseLoire eFrance
Iphunga le-anyanisi, ngingaliqeda kanjani ngempumelelo?
Okufanele ukwenze uma umlingani engakwazisi